Jehovha Mwari Anonzwira Tsitsi Huru Vanhu Vake | Swedera Pedyo
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Baoule Bengali Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Niuean Norwegian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Setswana Seychelles Creole Shona Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uruund Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
“Tsitsi Huru dzaMwari Wedu”
1, 2. (a) Amai vanowanzoita sei mwana wavo akachema? (b) Manzwiro api akasimba kutopfuura tsitsi dzaamai?
PAKATI pousiku, mwana anochema. Amai vake vanomuka pakarepo. Havacharari zvakanaka sezvavaisiita—hazvichabviri kubva pavakabereka mwana wavo. Vakatodzidza musiyano wemarudzi akasiyana-siyana okuchema kwomwana wavo. Nokudaro, kazhinji vanoziva kana mwana wavo achida chokudya, kubatwa mumaoko, kana kuti kutarisirwa neimwe nzira. Asi pasinei nechikonzero chokuchema kwomwana uyu, amai vacho vanoita chimwe chinhu. Mwoyo wavo haugoni kuvarega vachiita sevasiri kunzwa mwana wavo.
2 Tsitsi idzo amai vanonzwira mwana wavo wavakabereka ndedzimwe dzetsitsi huru padzose dzinozivikanwa nevanhu. Zvisinei, kune mamwe manzwiro akatosimba kupinda aya—tsitsi huru dzaMwari wedu, Jehovha. Kurangarirwa kwounhu hunokwezva uhwu kunogona kutibatsira kuswedera pedyo naJehovha. Saka, ngatikurukurei kuti tsitsi chii uye kuti Mwari wedu anodziratidza sei.
3. Shoko rechiito rechiHebheru rinoshandurwa kuti “ratidza ngoni” kana kuti “iva netsitsi” rinorevei?
3 MuBhaibheri, tsitsi nengoni zvakada kufanana. Mashoko echiHebheru neechiGiriki anoverengeka anopa pfungwa yetsitsi huru. Somuenzaniso funga nezveshoko rechiito rechiHebheru ra·cham′, iro rinowanzoshandurwa kuti “ratidza ngoni” kana kuti “iva netsitsi.” Rimwe bhuku rinotsanangura kuti shoko rechiito rokuti ra·cham′ “rinoratidza kunzwa tsitsi dzakadzama, dzakadai sedzinomutswa nokuona kushaya simba kana kuti kutambura kwevatinoda kana kuti avo vanoda kubatsirwa nesu.” Shoko rechiHebheru iri, iro Jehovha anoshandisira kwaari iye pachake, rakada kufanana neshoko re“chizvaro” uye rinogona kurondedzerwa se“tsitsi dzaamai.” *—Eksodho 33:19; Jeremia 33:26.
“Ko mukadzi ungakanganwa . . . mwanakomana wechizvaro chake here?”
4, 5. Bhaibheri rinoshandisa sei manzwiro ayo amai vanawo nokuda kwomwana wavo kutidzidzisa nezvetsitsi dzaJehovha?
4 Bhaibheri rinoshandisa manzwiro ayo amai vanawo nokuda kwomwana wavo kutidzidzisa nezvezvinoreva tsitsi dzaJehovha. Pana Isaya 49:15, tinoverenga kuti: “Ko mukadzi ungakanganwa mwana wake waanomwisa, akasava netsitsi [ra·cham′] nomwanakomana wechizvaro chake here? Zvirokwazvo ava vangakanganwa, asi ini handingakukanganwi.” Kurondedzera kunosvika pamwoyo uku kunoratidza ukuru hwetsitsi dzaJehovha nokuda kwevanhu vake. Sei?
5 Zvakaoma kufungidzira kuti amai vaizokanganwa kuyamwisa nokutarisira mwana wavo. Pamusoro pazvo svava haigoni kuzvibatsira; usiku nemasikati mwana anoda kutarisirwa naamai vake uye kudiwa. Zvisinei, zvinosiririsa kuti dzimwe nguva zvinoitika kuti vana vanoregeredzwa navanaamai, kunyanya mu“nguva [dzino] dzinonetsa” dzinoratidzwa nokushayikwa ‘kworudo rwokuzvarwa narwo.’ (2 Timoti 3:1, 3) “Asi ini handingakukanganwi,” Jehovha anozivisa kudaro. Tsitsi huru idzo Jehovha anadzo nokuda kwevashumiri vake hadzikundikani. Dzakasimba zvisingayereki kupfuura kunzwa kukuru kwetsitsi kwatinoberekwa nakwo kwatingafungidzira—tsitsi idzo amai vanowanzonzwira mwana wavo ari svava. Hazvishamisi kuti nei mumwe munyori akataura pamusoro paIsaya 49:15 achiti: “Aya ndiwo mamwe emashoko akasimba zvikuru, kana asiri iwo akasimba kupfuura ose okuratidza rudo rwaMwari muTestamende Yekare.”
6. Vanhu vazhinji vasina kukwana vakaona tsitsi huru nenzira ipi, asi Jehovha anotipikira nezvechii?
6 Tsitsi huru chiratidzo chokushaya simba here? Vanhu vazhinji vasina kukwana vakava nemaonero akadaro. Somuenzaniso, mumwe muzivi weRoma anonzi Seneca, uyo akararama panguva imwe naJesu uye imwe yenyanzvi dzepamusoro muRoma, akadzidzisa kuti “tsitsi kurwara kwepfungwa.” Seneca akanga ari mutsigiri wechiStoic, uzivi hunosimbisa kudzikama kusina tsitsi. Munhu akachenjera angabatsira vari kutambura, akadaro Seneca, asi haafaniri kuzvibvumira kunzwira tsitsi, nokuti manzwiro akadaro anomutorera kudzikama. Maonero oupenyu okungozvifunga aya aisabvumira mukana wetsitsi dzinobva pamwoyo. Asi izvozvo handizvo zvakaita Jehovha zvachose! MuShoko rake, Jehovha anotipikira kuti “ane rudo rukuru kwazvo uye ane ngoni.” (Jakobho 5:11, NW, Ref., mashoko omuzasi) Sezvatichaona, kuratidza tsitsi hakusi kushaya simba asi unhu hwakasimba hunokosha. Ngationgororei nzira iyo Jehovha anoratidza nayo tsitsi somubereki ane rudo.
Apo Jehovha Akaratidza Tsitsi Kune Rumwe Rudzi
7, 8. VaIsraeri vakatambura munzirai muIjipiti yekare, uye Jehovha akaitei nokutambura kwavo?
7 Tsitsi dzaJehovha dzinooneka zvakajeka munzira iyo akabata nayo norudzi rwaIsraeri. Pakupera kwezana remakore rechi16 B.C.E., mamiriyoni evaIsraeri akanga ari varanda muIjipiti yekare, uko aidzvinyirirwa zvakaoma. VaIjipiti “vakanetsa upenyu hwavo nebasa rinorema pamatope nezvitinha.” (Eksodho 1:11, 14) Vari mukutambura kwavo, vaIsraeri vakachema kuna Jehovha kuti avabatsire. Mwari wetsitsi huru akaitei?
8 Mwoyo waJehovha wakarwadziwa. Akati: “Zvirokwazvo, ndakaona kunetswa kwavanhu vangu vari [muIjipiti], ndikanzwa kudanidzira kwavo nokuda kwavatariri vavo vamabasa; nokuti ndinoziva kuchema kwavo.” (Eksodho 3:7) Jehovha aisagona kuona kutambura kwevanhu vake kana kuti kunzwa kuchema kwavo asingavanzwiri tsitsi. Sezvatinoona muChitsauko 24 chebhuku rino, Jehovha ndiMwari anonzwira vamwe tsitsi. Uye tsitsi—kukwanisa kunzwa marwadzo evamwe—dzakafanana nengoni. Asi Jehovha haana kungonzwira tsitsi vanhu vake; akanzwa kuda kuvaitira chimwe chinhu. Isaya 63:9 inoti: “Wakavadzikinura norudo rwake netsitsi dzake.” “Nechanza chine simba,” Jehovha akanunura vaIsraeri kubva muIjipiti. (Dheuteronomio 4:34) Pashure paizvozvo, akavapa zvokudya zvinoshamisa ndokuvanunura achivapinza munyika yavo inobereka zvibereko.
9, 10. (a) Nei Jehovha akaramba achinunura vaIsraeri pashure pokunge vagara muNyika Yakapikirwa? (b) Mumazuva aJefta, Jehovha akanunura vaIsraeri pakudzvinyirira kwei, uye chii chakamuita kuti aite kudaro?
9 Tsitsi dzaJehovha hadzina kugumira ipapo. Vagara muNyika Yakapikirwa, vaIsraeri vakadzokera vadzokerazve mukusatendeka zvichiguma nokutambura. Asi vanhu vacho vaizopengenuka vodana kuna Jehovha. Akavanunura avanunurazve. Nei? “Nokuti wakanga ane tsitsi navanhu vake.”—2 Makoronike 36:15; Vatongi 2:11-16.
10 Funga nezvezvakaitika mumazuva aJefta. Sezvo vaIsraeri vakanga vatanga kushumira vanamwari venhema, Jehovha akavabvumira kudzvinyirirwa nevaAmoni kwemakore 18. Pakupedzisira, vaIsraeri vakapfidza. Bhaibheri rinotiudza kuti: “Ipapo vakarasha vamwari vatorwa vakanga vari pakati pavo, vakashumira Jehovha; mwoyo wake ukachema pamusoro pokutambudzika kwavaIsraeri.” * (Vatongi 10:6-16) Vanhu vake pavakangoratidza kupfidza kwomwoyo wose, Jehovha akanga asingachagoni kutsungirira kuvaona vachitambura. Naizvozvo Mwari wetsitsi huru akapa Jefta simba kuti anunure vaIsraeri mumaoko evavengi vavo.—Vatongi 11:30-33.
11. Kubva mukubata kwaJehovha nevaIsraeri, chii chatinodzidza pamusoro petsitsi?
11 Ko kubata kwaJehovha norudzi rwevaIsraeri kunotidzidzisei nezvetsitsi? Chokutanga, tinoona kuti hakusi kungoziva nhamo iyo vanhu vanayo uchinzwira ngoni. Yeuka muenzaniso waamai avo tsitsi dzavo dzinovaita kuti vaite chimwe chinhu nokuchema kwomwana wavo. Saizvozvowo, Jehovha haasi matsi kana vanhu vake vachichema. Tsitsi dzake huru dzinomuita kuti avazorodze pakutambura kwavo. Mukuwedzera, nzira iyo Jehovha akabata nayo nevaIsraeri inotidzidzisa kuti kuratidza tsitsi hakusi kushaya simba chero napaduku pose, nokuti unhu hwounyoro uhwu hwakamuita kuti aite chiito chakasimba chokukurumidza nokuda kwevanhu vake. Asi Jehovha anongoratidza tsitsi kuvashumiri vake seboka chete here?
Tsitsi dzaJehovha Kumunhu Mumwe Nomumwe
12. Mutemo wakaratidza sei tsitsi dzaJehovha kumunhu mumwe nomumwe?
12 Mutemo uyo Mwari akapa rudzi rwaIsraeri wakaratidza tsitsi dzake kumunhu mumwe nomumwe. Tora somuenzaniso kushushikana kwake nokuda kwevarombo. Jehovha aiziva kuti mamiriro ezvinhu akanga asina kufanoonekwa aigona kumuka aigona kuwisira muIsraeri muurombo. Varombo vaifanira kubatwa sei? Jehovha akarayira vaIsraeri zvakasimba kuti: “Usatsungira hama yako murombo, kana kumufumbatirira ruoko rwako; asi umutambanudzire ruoko rwako kwazvo. Unofanira kumupa zvakanaka, mwoyo wako haufaniri kuva neshungu, kana uchimupa; nokuti nokuda kwechinhu ichi Jehovha Mwari wako uchakuropafadza pamabasa ako, napazvose zvaunobata namaoko ako.” (Dheuteronomio 15:7, 10) Jehovha akarayirazve kuti vaIsraeri vasakohwa micheto yeminda yavo yose kana kuti kunonga zvaisaririra. Kunongerera kwakadaro kwaiva kwevanotambura. (Revhitiko 23:22; Rute 2:2-7) Apo rudzi rwacho rwakatevera mutemo uyu unorangarira varombo vaiva pakati pavo, varombo vaiva muna Israeri vaisafanira kupemha zvokudya. Ikoko kwakanga kusiri kuratidzwa kwetsitsi huru dzaJehovha here?
13, 14. (a) Mashoko aDhavhidhi anotipikira sei kuti Jehovha ane hanya zvikuru nesu somunhu mumwe nomumwe? (b) Zvingaenzanisirwa sei kuti Jehovha ari pedyo neavo “vane mwoyo yakaputsika” kana kuti vane ‘mudzimu wakapwanyika’?
13 Nanhasiwo, Mwari wedu ane rudo ane hanya zvikuru nesu somunhu mumwe nomumwe. Tinogona kuva nechokwadi chokuti anonyatsoziva kutambura kupi nokupi kwatingasangana nakwo. Munyori wePisarema Dhavhidhi akanyora kuti: “Meso aJehovha anotarira vakarurama, uye nzeve dzake dzinonzwa kuchema kwavo. Jehovha uri pedyo nevane mwoyo yakaputsika, unoponesa vane mweya yakapwanyika.” (Pisarema 34:15, 18) Pamusoro peavo vanorondedzerwa nemashoko aya, mumwe mutsinhiri weBhaibheri anoti: “Vane mwoyo wakaputsika nomwoyo unozvidemba, ndiko kuti wakaninipiswa nechivi, usina kuzviremekedza; vanozviona sevakaderera, uye havana chivimbo chokukosha kwavo.” Vakadaro vanganzwa sokuti Jehovha ari kure kure uye kuti vakanyanya kusava nematuro kuti ave nehanya navo. Asi handizvo. Mashoko aDhavhidhi anotipikira kuti Jehovha haasiyi “vanozviona sevakaderera.” Mwari wedu ane tsitsi anoziva kuti panguva dzakadaro, tinomuda kupfuura nakare kwose, uye ari pedyo.
14 Funga zvakaitika izvi. Vamwe amai kuUnited States vakamhanya nemwanakomana wavo wemakore maviri kuchipatara nemhaka yokuti akanga achirwara kwazvo. Pashure pokutarisa mukomana wacho, vanachiremba vakaudza amai vake kuti vaizofanira kumuchengeta ari muchipatara usiku hwose. Amai vacho vakararepi usiku ihwohwo? Pachigaro mukamuri romuchipatara, pedyo chaipo nomubhedha womwanakomana wavo! Kakomana kavo kakanga karwara, uye vaitofanira kuva pedyo nako. Chokwadi tinogona kutarisira zvakatowanda kubva kuna Baba vedu vane rudo vokudenga! Pamusoro pazvo, takaitwa nomufananidzo wavo. (Genesi 1:26) Mashoko anosvika pamwoyo ePisarema 34:18 anotiudza kuti apo tinenge ta“putsika mwoyo” kana kuti ‘mudzimu wakapwanyika,’ Jehovha, somubereki ane rudo, “uri pedyo”—ane tsitsi nguva dzose uye akagadzirira kubatsira.
15. Inzira dzipi idzo Jehovha anotibatsira nadzo somunhu mumwe nomumwe?
15 Saka Jehovha anotibatsira sei zvino somunhu mumwe nomumwe? Hazvirevi hazvo kuti anobvisa chinotitambudza. Asi Jehovha akaronga zvinhu zvakawanda nokuda kweavo vanochema kwaari kuti avabatsire. Shoko rake Bhaibheri rinopa mazano anoshanda anobatsira zvikuru. Muungano, Jehovha anopa vatariri vane zvinodiwa zviri muMagwaro, avo vanoedza kuratidza tsitsi dzake mukubatsira hama dzavo dzavanonamata nadzo. (Jakobho 5:14, 15) Sezvo ari wo“kunzwa munyengetero,” anopa “mudzimu mutsvene zvikuru sei vano[mu]kumbira.” (Pisarema 65:2; Ruka 11:13) Mudzimu unogona kutipa “simba rinopfuura romuzvarirwo” kuti titsungirire kusvikira Umambo hwaMwari hwabvisa zvinetso zvose zvinoodza mwoyo. (2 VaKorinde 4:7) Hationgi here zvose zvatakapiwa izvi? Ngatiregei kukanganwa kuti kuratidzwa kwetsitsi huru dzaJehovha.
16. Ndoupi uri muenzaniso mukuru payose wetsitsi dzaJehovha, uye unoshanda sei kwatiri somunhu mumwe nomumwe?
16 Chokwadi muenzaniso mukuru pane yose wetsitsi dzaJehovha kupa kwake Mudikanwi wake sorudzikinuro nokuda kwedu. Chakanga chiri chibayiro chorudo chakaitwa naJehovha, uye chakazarura nzira yoruponeso rwedu. Yeuka, rudzikinuro rwatakapiwa runoshanda kwatiri isu pachedu. Nechikonzero chakanaka, Zekaria, baba vaJohani Mubhabhatidzi, vakafanotaura kuti chipo ichi chaisimbisa “tsitsi huru dzaMwari wedu.”—Ruka 1:78.
Apo Jehovha Anorega Kuratidza Tsitsi
17-19. (a) Bhaibheri rinoratidza sei kuti tsitsi dzaJehovha dzine padzinogumira? (b) Chii chakaparira kuti tsitsi dzaJehovha nokuda kwevanhu vake dzisvike padzinogumira?
17 Tinofanira kufungidzira kuti tsitsi huru dzaJehovha hadzina padzinogumira here? Kwete, Bhaibheri rinoratidza zvakajeka kuti pavanhu vanorwisana nenzira dzake dzakarurama, sezvakakodzerawo Jehovha haaratidzi tsitsi. (VaHebheru 10:28) Kuti uone kuti nei achidaro, yeuka muenzaniso worudzi rwaIsraeri.
18 Kunyange zvazvo Jehovha akanunura vaIsraeri avanunurazve pavavengi vavo, pakupedzisira tsitsi dzake dzakazoguma. Rudzi rwakaoma musoro urwu rwainamata zvidhori, ruchitounza zvidhori zvarwo zvinonyangadza mutemberi yaJehovha chaiyo! (Ezekieri 5:11; 8:17, 18) Uyezve, tinoudzwa kuti: “Vakaseka nhume dzaMwari, vakazvidza mashoko ake, vakadadira vaprofita vake, kusvikira Jehovha atsamwira vanhu vake, kusvikira vasichagoni kurapwa.” (2 Makoronike 36:16) VaIsraeri vakasvika padanho rokuti pakanga pasisina chikonzero chakakodzera chokuratidza tsitsi, uye vakadenha hasha dzakarurama dzaJehovha. Zvichiguma nei?
19 Jehovha aisagona kunzwirazve vanhu vake tsitsi. Akazivisa kuti: “Handinganzwiri tsitsi, handingadariki mumwe, kana kuva nengoni, kuti ndirege kuvaparadza.” (Jeremia 13:14) Nokudaro, Jerusarema netemberi yaro zvakaparadzwa, uye vaIsraeri vakaendeswa senhapwa kuBhabhironi. Apo vanhu vanotadza vanopanduka zvokusvika pakupedza tsitsi dzaMwari, panova nengwavaira huru!—Mariro aJeremia 2:21.
20, 21. (a) Chii chichaitika apo tsitsi dzaMwari dzinosvika padzinogumira muzuva redu? (b) Chipo chipi chetsitsi dzaJehovha chichakurukurwa muchitsauko chinotevera?
20 Zvakadini nanhasi? Jehovha haana kuchinja. Nemhaka yetsitsi, akagadza Zvapupu zvake kuti zviparidze “mashoko akanaka oumambo” mupasi rose rinogarwa. (Mateu 24:14) Apo vanhu vane mwoyo yakarurama vanonzwa, Jehovha anovabatsira kunzwisisa shoko roUmambo. (Mabasa 16:14) Asi basa iri harizorambi richiitwa nokusingaperi. Hakungazovi kuratidza tsitsi kwaJehovha kubvumira nyika ino yakaipa, nenhamo dzayo dzose dzinotambudza, kuramba iripo nokusingaperi. Apo tsitsi dzaMwari dzinenge dzasvika padzinogumira, Jehovha achatonga nyika ino. Kunyange ipapo anenge achiita chiito nokuda kwetsitsi—tsitsi nokuda kwe“zita [rake] dzvene” uye nokuda kwevashumiri vake vakazvipira. (Ezekieri 36:20-23) Jehovha achabvisa uipi hwose ounza nyika itsva yakarurama. Nezvevakaipa, Jehovha anozivisa kuti: “Ziso rangu haringapembedzi, handingavi netsitsi, asi ndichauyisa zvavakaita pamisoro yavo.”—Ezekieri 9:10.
21 Kuzosvikira panguva iyoyo, Jehovha anonzwira vanhu tsitsi, kunyange avo vakatarisana nokuparadzwa. Vanhu vanotadza vanopfidza zvechokwadi vanogona kubatsirwa nechimwe chezvipo zvetsitsi huru dzaJehovha—kukanganwira. Muchitsauko chinotevera, tichakurukura mamwe emashoko anojekesa zvakanaka kwazvo ari muBhaibheri anoratidza kukwana kwakaita kukanganwira kwaJehovha.
^ ndima 3 Zvisinei, sezvineiwo pana Pisarema 103:13, shoko rechiito rechiHebheru ra·cham′ rinoratidza ngoni, kana kuti tsitsi, idzo baba vanoratidza vana vavo.
^ ndima 10 Mashoko okuti “mwoyo wake ukachema” anoreva kuti “mweya wake wakava mupfupi; kushivirira kwake kwakapera.” The New English Bible rinoti: “Akanga asisagoni kutsungirirazve kuona kutambura kwaIsraeri.” Tanakh—A New Translation of the Holy Scriptures inoshandura ichiti: “Aisagona kutsungirira matambudziko evaIsraeri.”
Jeremia 31:20 Manzwiroi etsitsi ayo Jehovha anawo nokuda kwevanhu vake, uye izvi zvinokuita kuti unzwe sei?
Joere 2:12-14, 17-19 Vanhu vaJehovha vaifanira kuitei kuitira kuti vagoratidzwa tsitsi, uye tinodzidzei pane izvi?
Jona 4:1-11 Jehovha akadzidzisa sei Jona chidzidzo pamusoro pokukosha kwetsitsi?
VaHebheru 10:26-31 Nei tisingagoni kungoita madiro nengoni dzaJehovha, kana kuti tsitsi?